VideoScribe: Ilay doka tianao foana hamoronana | Famoronana an-tserasera
Efa hitanao ve ireo karazana doka misy tanana tena manintona toa manintona zava-mahatalanjona nefa tsy mihozongozona ny fanao? Izaho irery ve no mijanona tsy mandinika an'ireo karazan-dahatsary ireo? Noheveriko foana fa io tànana io dia nanintona tanteraka izay rehetra toa nanintona. Saingy, tsy ela aho dia tratry ny karazana bipolar teo anelanelan'ny fahaketrahana sy ny fahagagana rehefa hitako fa fandaharana iray no manao izany. Na dia tena diso fanantenana aza aho dia hitako fa afaka mamorona horonan-tsary miaraka amin'ity hatsarana manintona ity ihany aho nefa tsy mila manambola vola be amin'ny fitaovana fandraketana matihanina, jiro ary maro hafa. Nahita ny programa aho ary ny marina dia izaho Izaho dia nanantena valiny mahatsiravina kokoa noho izay hitako.
Io programa io no antsoina VideoScribe avy amin'ny Sparkol Company ary tiako hizara izany aminao. Ny kalitao dia tena tsara, vahaolana mailaka, kanto ary tena mahomby izy io. Miaraka aminy ianao dia afaka mamorona hatramin'ny hatsaran-tarehin'ny tanora ka hatrany amin'ny orinasa iray, mahavariana ihany ny vokany.
Ary ... aiza no ahitako an'ity programa tsara ity? Eny, araka ny nampoizinao, tsy maimaimpoana ilay programa. Saingy manome ny fahafaha-misintona ny fitsarana fitsarana izany. Azonao atao ny misintona azy mora foana amin'io pejy ofisialy, tsy maintsy misoratra anarana ianao hisintona azy. Raha vantany vao misintona azy ianao dia afaka manomboka mampiasa azy. Avy hatrany rehefa apetrakao io dia hipoitra amin'ny fomba ifandraisana tanteraka ny torolàlana ary ampidirina ao amin'ilay rindrambaiko mihitsy. Ny fandidiana azy dia tena tsotra be ary azo ovaina koa. Na dia mamporisika anao aza aho manandrana mampiasa fanoharana hamoronana ny horonan-tsarinao, satria raha mampiasa sary izahay dia maloka ny vokany, maharary ary tsy dia tsara (farafaharatsiny ho ahy).
Ity misy fampisehoana ireo zava-mahatalanjona fa afaka miasa amin'ny tsindry tsotra vitsivitsy ity fampiharana ity. Raha misintona azy ianao, na raha misy famoronana noforonina tamin'ny VideoScribe, Aza misalasala mizara izany amiko! ;)
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » VideoScribe: Ilay doka tianao noforonina hatrizay
Salama Xavier! Misaotra tamin'ny fandraisana anjara, tetik'asa mahaliana sasany. Mirary ny soa indrindra!
aillien rojas dia hoy izy:
Salama marina, manana zavatra tsara betsaka vakiana ianao ... misaotra indrindra!
Mamaly an'i aillien rojas